thinzar's blog: တစ်ကျောင်း တစ်ဂါထာ
အရင်အပါတ်က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Al-Rawsha Restaurant မှာဘူဖေး သွားစားဖြစ်တယ်။ လက်ဘနွန် အစားအသောက်တွေ ရောင်းတဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ပေါ့။ ကျောင်းက သူငယ်ချင်းအများစုက အာရပ်တွေ များတော့ သူတို့တွေနဲ့ အပြင်ထွက်စားဖြစ်တိုင်း အာရပ် စားသောက်ဆိုင်ရွေးကြတာ များတယ်။ တစ်နေ့တစ်နေ့ အလုပ်သွားလိုက် အိမ်ပြန်လိုက်နဲ့ဘဲ အချိန်ကုန်နေတော့ ဒီလို တစ်ခါတစ်လေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ရတာလည်း တော်တော်တော့ ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ မတွေ့ကြတာလည်း ကြာပြီဆိုတော့ ကိုယ့်အကြောင်း သူ့အကြောင်း အလုပ်အကြောင်းတွေ ပြောကြနဲ့ ည ဆယ်နာရီလောက်မှ အိမ်ပြန်ရောက်တယ်။
ဒါပေမယ့် ဘူဖေး စားရတာကို ကျမ သိပ်မကြိုက်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘူဖေးက တော်တော် စားနိုင်တဲ့သူတွေ အတွက်မှ တန်တာလေ။ ကျမလိုမျိုး မက်ဒေါ်နယ်လ် တစ် set တောင် မနည်းကုန်အောင် စားရတဲ့ လူမျိုးအတွက်တော့ မတန်ဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေ အတင်းခေါ်လို့သာ လိုက်စားဖြစ်တာ။ အစားအသောက်တွေကတော့ မဆိုးပါဘူး။ ဘာတွေမှန်း မသိတာ တစ်ခုဘဲ။ တွေ့တာ အကုန်နီးပါး ထည့်ယူလာပြီး နောက်မှ သူတို့ကို ပြန်မေးရတယ်။ dessert ကတော့ အရမ်းကောင်းတယ်။ အချိုတော့ အရမ်းများလွန်းတယ်။ Baqlawa နဲ့ Basboosa တော့ အကြိုက်ဆုံးဘဲ။ နောက်မှ သူ့ website မှာ ပြန်ကြည့်ကြည့်တော့ ပုံမှန် အချိန်တောင် ဒီလောက် ဈေးရှိရင် ကိုယ်စားခဲ့တဲ့ ဘူဖေးက တန်သလိုလိုတော့ ရှိသား။ ဒါကြောင့် လာစားတဲ့သူ ဒီလောက်များတာနေမယ်။ အာရပ် restaurant တွေရဲ့ မပါမဖြစ် ရှိရှာ တွေလည်း ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအတွက် ပိုက်ဆံ သပ်သပ် ထပ်ပေးရတယ်နေမယ်။
ဆိုင်နာမည်ကို စိတ်ဝင်စားလို့ ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲလို့ မေးကြည့်တဲ့အခါ Rawsha ဆိုတာ လက်ဘနွန် နိုင်ငံ မြို့တော် Beirut အနီး မြေထဲ ပင်လယ်ထဲက ကျောက်တုံး ရဲ့ နာမည်ကို ယူထားတာပါ။ အဲဒီ ကျောက်တုံးက မီတာ ၆ဝ လောက်မြင့်တဲ့အတွက် အလယ်မှာ သဘောင်္ ဖြတ်လို့ ရအောင် လူတွေက tunnel ပုံစံမျိုး ဖောက်ထားလို့ နာမည်ကြီးတာပါ။ Rawsha Rock လို့ခေါ်သလို Pigeon Rock လို့လဲ ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီ ကျောက်တုံးကို ဘယ်သူ အပေါက်ဖောက်သွားသလဲဆိုတာတော့ သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေထဲမှာ မရှိတဲ့အတွက် ဘယ်သူမှ မသိကြပါဘူးတဲ့။
စကားပြောရင်း တီဗီတွေအကြောင်း ရောက်သွားသေးတယ်။ တစ်ခု အံ့ဩမိတာက ရုပ်ရှင် ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ အာရှမှာဘဲ အရမ်းကို ခေတ်စားလွန်းတယ် ထင်ထားတာ။ အပိုင်းခြောက်ဆယ်လောက်ရှိတဲ့ ပိုးမင်းသားရဲ့ သိုင်းသိဉာဉ် ဇာတ်လမ်းတွဲကို ရှည်လျားလှပြီ အောက်မေ့တာ။ အာရပ်နိုင်ငံနဲ့ အာဖရိက နိုင်ငံ အချို့ မှာ အပိုင်း ၁၀ဝ ကျော်တဲ့ တူရကီ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ အလွန်အင်မတန် ခေတ်စားသတဲ့။ အခုနောက်ဆုံး ခေတ်အစားဆုံး ဇာတ်လမ်းတွဲက Nor (အလင်းရောင်) ဆိုလားဘာလား။ statistics အရ အဲဒီ ဇာတ်လမ်းတွဲကို ကြည့်တဲ့သူပေါင်း လေးသန်းကျော် ရှိတယ်တဲ့။ အဲဒီဇာတ်လမ်းထဲက မင်းသားနဲ့ မင်းသမီးကြောင့် လင်မယားကွဲတဲ့ အဖြစ်တွေဟာလဲ မရေမတွက်နိုင်အောင် ရှိပါတယ်တဲ့။ မိန်းမက ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက မင်းသားရဲ့ပုံကို ဖုန်းဘက်ဂရောင်း အဖြစ်ထားလို့ ကွဲတဲ့ case ကလည်း ပါသေး။ မြန်မာပြည်မှာတုန်းကတော့ ကိုးရီးယား ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကြောင့် လင်မယား ရန်ဖြစ်တာတော့ ကြားဖူးပါတယ်။ လင်မယား ကွဲကြတယ် ဆိုတာတော့ မကြားမိသလိုဘဲ။ သူတို့နိုင်ငံတွေလည်း တစ်ကျောင်းတစ်ဂါထာပါဘဲ။
Restaurant website - http://www.al-rawsha.com/Default.asp
Photo Credit: http://www.zohry.com/galleries/countries/lebanon/photo01.htm
တို.လဲ ရန်ကုန်ပြန် တုံးက စပိုင်ချစ်သူ ကိုးရီးယား ကား ထဲ က မင်းသား ကိုကြီုက် လို. ကောင်လေးကို ဓါတ်ု့ပုံ ရိုက်ယူလားခဲ.သေးတယ်။ ပြနေတုံး ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ.တာ။
23/9/08 11:33 PM
ဇာတ်လမ်းတွဲတွေက အင်မတန်ခေတ်စားတာပဲနော်.. ကျွန်တော်ကတော့ တီဗွီကို သတင်းနဲ့ ဘောလုံးပွဲလောက်ပဲ ကြည့်ဖြစ်တော့တယ်...
24/9/08 2:00 AM
ခဏခဏ လာပေမဲ့ရေးစရာ နေရာမရှိလို. ဒီမှာဘဲ နှတ်ဆက်ပါရစေ.
24/9/08 10:21 PM
မခင်ဦးမေ>> အဲဒီမင်းသား တော်တော် ချောတာနော်။ သဉ္ဖာလည်း အရမ်းကြိုက်တယ်။ ခုကော အဲဒီပုံ ရှိသေးလား။ ကို kmsl က ဘာမှ မပြောဘူးလားဟင် :D
ကိုပီတိ>> အင်း..ဟုတ်တယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေက အခုဆို တစ်ကမာ္ဘလုံးကို လွှမ်းမိုးထားသလိုတောင် ဖြစ်နေပြီ။ စကြည့်လိုက်မိတာနဲ့ မပြီးတော့ဘူး။ ဘောလုံးပွဲ ကြည့်တာဘဲ ကောင်းပါတယ် :)
25/9/08 1:29 PM
hmm....tak paham...but i think thats the food from rawsha? :P
28/9/08 4:15 PM
liza>> heehee.. good guess!!
29/9/08 10:45 AM
ရေကူးကန် နှင့် သေနတ် တို့က ပေးနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်
လေ့လာမိသော မလေးလူမျိုးများဧ။် ရိုးရာဓလေ့ အမူအကျင့်...
Are hackers targeting blogspot??